Madaxweyne Qoor-qoor, oo Dhuuso-mareeb ku soo laabtay. - Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Madaxweyne Qoor-qoor, oo Dhuuso-mareeb ku soo laabtay.
Madaxweyne Qoor-qoor, oo Dhuuso-mareeb ku soo laabtay.
Madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Cabdi kaariye ( Qoor-qoor) iyo wafdi uu hoggaaminayo oo safar ugu maqnaa dalka Jabuuti , ayaa Isniintii manta dib ugu soo laabtay Caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb.
Madaxweynaha iyo wefdigiisa waxaa garoonka diyaaradaha Ugaas Nuur ee Magaalada Dhuusamareeb ku qaabilay Guddoomiyaha golaha Barlamaanka Galmudug Dr. Max’ed Nur Gacal, xubno ka tirsan labadda gole ee Galmudug, Hawl-wadeenada Madaxtooyada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada.
Madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye, ayaa intii uu Jabuuti ku sugnaa waxa uu kulan la qaatay madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle, wasiiro ka tirsan dawladda Jabuuti iyo madaxda sare ee Dekadaha dalkaas, waxaana ay ka wada hadleen iskaashiga dhinacyada kaabayaasha dhaqaalaha, amniga iyo la dagaalanka xagjirka.